Iphepha le-Biodegradable yomhlaba kunye neMakethi yokuPakisha kaPlastiki ka-2019 ukuya ku-2026 ngokwahlulahlula: Ngokusekwe kwimveliso, kwisicelo nakwingingqi | Haishu
Iphepha leNdawo ePhilayo ngeBhayoloji yeHlabathi kunye neMakethi yokuPakisha kaPlastiki ka-2019 ukuya ku-2026 ngokwahlulahlula: Ngokusekwe kwimveliso, kwisicelo nakwindawo
Ngokutsho kwedatha yeNtengiso yeDatha, intengiso yephepha elinokubakho ngamaphepha kunye nopakisho lweplastiki lixhomekeke ngqo kuhlumo loluntu nakubathengi. Utyekelo lokuqhelana noluncedo malunga neempahla ezinokubakho luhambisa ukukhula kweshishini kwihlabathi liphela. Eli galelo lamkela ukuqhubela phambili okuqhubekekayo neendlela zokunyusa ukukhupha ukusetyenziswa kweplasitiki kube nye. Ubume beendleko eziphezulu zeshishini lokupakisha kunye nokusetyenziswa okunyukayo kwezinto zebhayoloji kunye nezinto eziphilayo kunokunciphisa ukukhula kwemakethi kwifestile yexesha elichazwe kwangaphambili.
Ngoku umbuzo ngowokuba yeyiphi eminye imimandla ephambili abadlala indima yentengiso abaza kujolisa kuyo? Idatha yokuPhanda ngeNtengiso yeDatha iveze ukukhula okukhulu eNyakatho Melika naseYurophu kwisiseko sokunyuka kokusetyenziswa kweempahla ezipakishwe kunye nokwazi kweempawu zobume bendalo ngaphezulu kwephepha elingonakalisiyo kunye nokufakwa kweplastiki.
Iphepha elinokubakho ngenxa yokusetyenziswa kwephepha kunye nezinto ezenziwe ngeplastikhi yimveliso enobuhlobo kwaye ayizukukhupha nayiphi na ikhabhoni ngexesha lenkqubo yokwenza. Imfuno yokufakwa ephepheni iphepha kunye nokufakwa kweplastiki kuyakhula ngenxa yolwazi olwandayo kubemi olunxulumene nokufakwa ngokwasekhompyutheni kwaye kusebenza kwimizi mveliso emininzi efana nokuthengiswa kwamayeza, ukutya, ukhathalelo lwempilo kunye nokusingqongileyo. Umzi mveliso wokutya nesiselo uxhomekeke kakhulu kwizixhobo zokupakisha kusetyenziswa iintlobo ezahlukeneyo zeplastiki.
Iqwalaselwa eyona nto ichanekileyo kwaye inenzuzo kukhuseleko lweemveliso zokutya. Abantu sele beqalisile ukusetyenziswa kwezinto zokufaka izinto ezinokuphawuleka zithwele izinto zokutya. Ke ngoko, imfuno yamaphepha ahambelana nezinto eziphilayo kunye nepakeji yepakeki iyakhula. Iphepha le-biodegradable ephepheni kunye nepakeji yepakethe yplastiki kuqikelelwa ukuba ibhalise i-CAGR esempilweni ye-9.1% kwixesha lokuqikelelwa lowama-2019 ukuya kowama-2026.
Ixesha lokuposa: Jun-29-2020